Naadiga Barcelona Oo Heshiis la Gaartay Xiddig Reer Brazil ah -
HomeciyaarahaNaadiga Barcelona Oo Heshiis la Gaartay Xiddig Reer Brazil ah
Naadiga Barcelona Oo Heshiis la Gaartay Xiddig Reer Brazil ah
Waxaa dhacay kulan dhexmaray maamulka kooxda Barcelona, kooxda Gremio iyo xiddiga qadka dhexe ee reer Brazil Arthur – seddaxda dhinac ayaana heshiis hordhac ah ku gaaray kulankaan, taasoo ka dhigan inuu Arthur kusoo biiri doono kooxda hogaamineysa horyaalka La Liga.
Barcelona ayaa 21 sanno jirkaan kula soo wareegi doonta adduun lacageed dhan 30 milyan oo euros, laakiin waxaa jiri doona qiimo lacageed kale oo ku xiran qaab ciyaareedka iyo guulaha xiddigaan oo ay Barcelona qaab gunno ahaan ah u bixin doonto.
Xoghayaha kooxda La Blaugrana Robert Fernandez ayaa kulan la yeeshay kooxda ka dhisan Porto Alegre ee Gremio iyo wakiilka Arthur ee lagu magacaabo Jorge Machado
Website-ka reer Brazil ee Universo Online ayaa sheegaya in labada kooxood ay heshiis isla meeldhigeen, sidoo kalena Arthur iyo Barcelona ay heshiis hordhac ah wada-gareen, laakiin lama shaacin xilliga uu Arthur ku biiri doono kooxda ka dhisan Catalonia.
Shabakadda Universo Online ayaase ku warameysa in la filayo inuu xiddigaani ku biiro Barcelona bisha January 2019ka, laakiinse kulan dheeri ah ayaa dhexmari doona labada dhinac Talaadada iyo Arbacada iyadoo looga hadli doono qeybaha ka haray heshiiskaan.
Barcelona ayaa la filayaa inay marka hore bixiso 30 milyan oo euros oo kaash ah, halka ay dib ka bixin doonto 10 milyan oo euros oo dheeraad ah taasoo ku xirnaan doonta qaab ciyaareedka, tirada kulamada iyo koobabka uu Arthur la qaado kooxda ka dhisan Camp Nou Stadium.